Home Wararka Wafdi ka socda dowlada Kenya oo gaaray Somaliland
Wafdi ka socda dowlada Kenya oo gaaray Somaliland
Sida ay sheegayaan Wararka ma imaanaya Magaalada Hargeysa ee Caasimada Somaliland. waxaa saacadihii lasoo dhaafay gaaray wafdi ka socday dowladda Kenya, kuwaasi oo lagu soo dhaweeyay Garoonka diyaaradaha Cigaal ee Magaaladaas.
Dowlada Somaliland ayaa sheegtay in ujeedada safarka wafdiga ka socday Kenya uu yahay sidii loo dardar-gelin fulinta heshiis Somaliland iyo Kenya ay 15-kii bishii December 2020 ku kala saxiixdeen Magaalada Nairobi.
Waxaa ka filayaa inta wafdigu joogo Somaliland ay soo booqdaan qaybo kala duwan ku sameeyay Garoonka diyaaradaha Cigaal ee Magaalada Hargeysa, isla markaana kulan la qaatay Mas’uuliyiin ka tirsan Somaliland, iyagoona ka wada hadlay Arrimo ku aadan shaqada Garoonka Cigaal.
Dhanka kale. Wasiir ku-xigeenka Arrimaha dibedda Somaliland Liibaan Yuusuf Cismaan oo ka hadlaayay socdaalka wafdiga ka socday Kenya ayaa waxaa uu sheegay in ujeedka wafdiga uu ahaa dardar-gelinta sidii loo fulin lahaa heshiisyadii ay Somaliland iyo Kenya wada galeen gaar ahaan midka ku aadan dhinaca duulimaadyada.